आज यी पाँच राशिको लागि अत्यन्तै शुभ छ दिन ! – Nayabook
आज यी पाँच राशिको लागि अत्यन्तै शुभ छ दिन !
२०७७ साल पौषशुक्लपक्ष माघ ७ गते बुधवारको राशिफल
काममा ढिलाइ होला तर काम अवश्य बन्ने छ । सबै तिरबाट लाभै लाभ मिल्नेछ । सांगितिक माहोलमा मनोरञ्जनक समय वित्नेछ । मित्रबाट सहयोग मिल्ला । सोच बिचार गरेर मात्र नयाँ काम गर्नु होला । बोलीमा नरमपन बढने देखिन्छ ।
आफन्तको सहयोग बाट काम बन्नेछन् । वैदेशिक क्षेत्रका काममा सफलता पाइनेछ । आम्दानीका स्रोतहरु बढ्नेछन् । वस्त्र, गर गहना सम्बन्धी लाभ हुनेछ । जागिरमा पदप्रतिष्ठा बढ्नेछ । परिवारमा माङ्गलिक कार्य हुनेछ । अध्ययन अधुरो रहला । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ ।
मान सम्मानका साथै आकस्मिक धन आर्जन हुनेछ ।काममा जोश र जाँगर बढ्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखदायी रहनेछ । सीपमूलक कार्यबाट फाइदा हुनेछ । व्यवसायबाट मनग्ये लाभ हुनेछ । पेयपदार्थ तथा सजावटका सामग्रीको व्यापार फस्टाउनेछ । स्वस्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
आम्दानीका स्रोतहरु बढ्नेछन । नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । अध्ययनमा जाँगर बढ्नाले शिक्षाएवं बौद्धिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ । घरायसी काम काजमा सन्तोष मिल्नेछ । सन्तानबाट सुख प्राप्त हुनेछ । रोगको प्रकोप हट्दै जानेछ ।
घुमघाम र मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । पारिवारिक भेटघाट होला । नोकरी सन्तोषजनक रहनेछ । काम गर्ने जाँगर हराउन सक्छ भने परिश्रम गर्न तर्फ मन लाग्नेछैन । रोकिएका काम बन्नेछन् । मानसम्मान प्राप्त होला । आकस्मिक धन आर्जन हुनेछ ।
राम्रो समय छ । व्यापार फस्टाउने छ । काममा सजिलै सफलता मिल्नेछ । आलोचना गर्नेहरुसंग भने सावधान रहनु होला । मुद्दा मामिलामा जित हुनेछ । आर्थिक उन्नतिका मार्गहरु खुल्नेछन् । परिवारमा सुख शान्ति छाउनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ ।प्रियजनको साथले काम बन्नेछ ।
पराक्रम बढ्नुका साथै कममा प्रशंसा मिल्नेछ । नयाँकाम पाइने योग छ । स्थान परिवर्तनको सम्भावना पनि छ, सरुवा बढुवा हुन सक्छ । प्रेम प्रसङ्गमा नयाँ मोड आउन सक्छ । स्वास्थ्य गडबड रहने कारण खानपानमा सचेत रहनुहोला । यात्रा रमाइलो रहनेछ । साझेदारी काममा विवाद हुन सक्छ ।।
आफन्तसँग मनमुटाव हुन सक्छ । आरोप लाग्न सक्छ सावधान रहनु होला । व्यवसायमा भने उपलब्धि हुनेछ । साझेदारी काममा विवाद हुन सक्छ । रमाइलो यात्रा हुनेछ । प्रियजनसँग भेट हुनेछ । अध्ययनमा कम रुचि रहला । रोकिएका काम बन्नेछन ।
बोलीको प्रभाव बढ्ने छ । धर्मकर्ममा मन जाला । भाग्यले साथ दिनेछ ।नयाँ रोजगारीका कुराले सन्तोष मिल्नेछ । मित्रबाट सहयोग प्राप्तहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट मनग्ये धन लाभ हुनेछ । सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ । यात्रा शुभ हुनेछ ।
बौद्धिक तथा सिर्जनात्मक काममा जुट्ने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक कारोवार गर्दा सावधान रहनु होला । तपाईंको कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिन्छ । बिग्रन लागेका कामहरु पनि सम्पन्न भएर जानेछन् । भाग्योदयको लागि उपयुक्त समय आएको छ प्रयास भने जारी राख्नु होला ।
रमाइलो यात्राहुने छ । काममा अवरोध हुने र अनावश्यक खर्च बढ्नेछ । मन चञ्चल र दुविधाग्रस्त रहला । काममा परिवारको सहयोग जुट्नेछ । अध्ययनमा मन जानेछ । नयाँ काम सन्तोषजनक रहला । समयमै निर्णय लिन नसक्दा हात परेको काम समेत गुम्ने सम्भावना छ ।
नयाँ काम सुरु हुने छ । बसाइ परिवर्तन हुनसक्छ । नोकरीमा पदप्रतिष्ठा बढ्नेछ । आर्थिक सङ्कट टर्नेछ । सवारी साधनबाट सुख मिल्नेछ । रमणीय यात्रापनि हुनेछ । व्यापारबाट यथेष्टलाभ हुनेछ । आफन्तको सहयोग रहनेछ । शिक्षामा प्रगति होला ।